पशुपतिनाथको जग्गा सिद्राको भाउमा ! | Samaj Khabar
पशुपतिनाथको जग्गा सिद्राको भाउमा !
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको साढे चार हजार रोपनी जग्गाबाट वार्षिक आम्दानी कति होला ? तपाईंले सहजै अनुमान लगाउनुहुनेछ, अर्बौं । तर, आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा रहेको ४ हजार ४ सय १३ रोपनी जग्गाबाट वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ पनि आम्दानी हुँदैन भन्दा अचम्म नमाने हुन्छ ।